ဖေ‌ဖျောဝါရီ 18, 2020 – Healthy Life Journal
ကျွန်မဖြစ်နေတာ ခေါင်းအရမ်းကိုက်ခြင်းပါ (Tension headache)
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ ကျွန်မနာမည် (—) ပါ။ အသက်က ၃၀ ပြည့်ပါပြီ။ (့) တက္ကသိုလ်က ဆရာမတစ်ယောက်ပါရှင့်။ အခုကျွန်မဖြစ်နေတာ ခေါင်းအရမ်းကိုက်ခြင်းပါ။ နားရွက်အကြောတွေလည်း ကိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရင် ညာဘက်မျက်လုံးထဲက အကြောတွေပါ လိုက်ကိုက်နေပါတယ်။ မျက်ခုံးရိုးလည်း တင်းနေပါတယ်ရှင့်။ ဇက်ကြောလည်း...
ဘာလုပ်သင့်ပါသလဲ . . .
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. Ultrasound ရိုက်တော့ အခုလိုပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်တွေလည်း အရမ်းကိုကျဆင်းနေပါပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ပြောပြပေးပါနော်။ ခွဲမှရမှာလားဆိုတာလည်း သိချင်ပါတယ်။ A. အာထရာဆောင်းအဖြေအရ သားဥအိမ်မှာ အရည်အိတ်နှစ်ဖက်စလုံး ဖြစ်နေပါတယ်။ ပထမတစ်ခေါက် ခွဲပြီးပြီပြောတယ်။...
ဓာတုဆေးနဲ့ အမှည့်မြန်အောင်လုပ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးကိုစားရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသလား …
ဒေါက်တာမိုးအောင်ကျော်နိုင် (အထွေထွေရောဂါအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ဓာတုဆေးနဲ့ အမှည့်မြန်အောင်လုပ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောသီးတွေကိုစားရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိ၊ မရှိ သိချင်လို့ပါ။ Tun Tun (FB) A. ဒီအဖြေကို တိတိကျကျတော့ မသိသေးပါဘူး။ မူလငှက်ပျောခိုင်ကနေ ငှက်ပျောသီးမှည့်စေတဲ့...